The Irrawaddy's Blog: စပွန်ဆာများတဲ့ ရွှေစင်
မော်ဒယ်လောကမှာ စပွန်ဆာ ချစ်သူများလှတဲ့ မော်ဒယ်ရွှေစင်ဆိုတာ မြန်မာ အနုပညာလောကမှာ အလွန် နာမည်ကြီးလှပါ တယ်။
သူကိုင်တဲ့ တယ်လီဖုန်း ဟမ်းဆက်ကအစ စီးတဲ့ ဇိမ်ခံကား အဆုံး အမေရိကန် ဒေါ်လာ သိန်းချီ အကုန်အကျခံ ၀ယ်ထားတဲ့ အကြောင်း လူသိရှင်ကြား ပြောခဲ့သူပါ။
သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး နာမည်ကျော် သူဌေးကြီးတဦးက အစစ အရာရာ နိုင်ငံခြားဈေးဝယ်ထွက်တိုင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာတွေ တထပ်ကြီး ပေးလေ့ရှိတယ်လို့လည်း နံမည်ကြီးတယ်။
သူ့ကို Lucky လေး လို့ ချစ်စနိုးခေါ်ပါသတဲ့။
နောက်တခုက သူက တကယ်လဲ အဲဒီစပွန်ဆာချစ်သူအတွက် ကံကောင်းခြင်းတွေ ယူဆောင်ပေးခဲ့၊ မပေးခဲ့တော့ ကာယကံရှင်ပဲ သိမှာပါ။ သူ ကစားပွဲသွားတိုင်း ရွှေစင်က အမြဲလိုက်ရသူလေးပါ တဲ့။ ရွှေစင်ပါတဲ့အတွက် အမြဲပဲ အနိုင်တွေ ရခဲ့လို့လား မသိဘူး။
မနှစ်ကတော့ ရွှေစင်တယောက် ချစ်သူနဲ့ စကားများ ရန်ဖြစ်ရာကနေ ရန်ကုန် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးမှာ ၁၉ ချက် ချုပ်လိုက်ရပါသတဲ့။
ဒီလောက် ပိုက်ဆံလည်း တတ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံဘာကြောင့် တက်ရသလဲ ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်က စိတ်ဝင်စားကုန် တာပေါ့။ တကယ်တော့ မှုခင်းသဘော သက်ရောက်သွားလို့ အဲဒီတုန်းက ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံမတက်ခဲ့တာပါ တဲ့။
ဓာတ်ပုံများ - myanmarcelebrity.com
မော်ဒယ် ရွှေစင်ရဲ့ အလန်းဇယား
အေတူကန် said... :
အောက်ဆုံးကပုံကို နောက်ဖက်ကရိုက်ထားတာ မရှိဘူးလားဗျာ။
နာမည်ကျော် သူဌေးကြီးတဦး ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ။ တိတိကျကျ ရေးသင့်တယ်။
၁၉ ချက်က ဘယ်နား ချုပ်လိုက်ရတာလဲဟင်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတော့ ပေးချင်စရာပါ။ စပွန်ဆာပြောပါတယ်။ ပိုက်ဆံစုလိုက်အုံးမယ်။ သူလေးဈေးတစ်ခါဝယ်စာလောက်ရအောင် ဘယ်နှနှစ်လောက်စုရမလဲမသိ။ အင်းဟုတ်တယ် အပေါ်က ပုဂ္ဂိုလ်ပြောသလို ၁၉ချက်က ဘယ်နေရာချုပ်ရတာတုန်း။ အဲဒါဆိုရင်တော့ စပွန်ဆာပေးဖို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်။
she's feeling good in last picture.
"koung nay tar...koung nay tar"
why she close her eye in last pic??
Commentd တွေဖတ်ဖြစ်လို့အဖြစ်အပြတ်လေးတစ်ခုရေး လိုက်ပါတယ်။ဘော်ဒါတ်ို့ကောသောင်း မြိုစွန်က စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ'' "--"ဒါလုပ် စားတာဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ဘူး သိန်း၅၀ ပေးရမယ် ဆိုတာကိုကြားလိုက်မိတယ်။'' ကြည့်လိုက်တော့ ကိလေသာ မကုန်သေးသေားယောကျာင်္းများအားလုံး ပြစ်မှာခြင်စရာ စပွန်စာ မမ ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်ပုံက ခေါ်လာတဲသဌေးက သူအတွက် ၁၅သိန်း ဆိုပဲ သဌေးပြီတော့ နောက်လိုက် ၇ ယောက်က ဝိုင်အားပေးလိုက်ကြတယ် ။သေချာတာတော့ ၁၉ ချက် တရာခံ ကတော့ သူတို့ မဟုတ်ပါဘူး။ပြသနာက ကြန် ၇ယောက် စာတောင်တာ ကနေ စကားများကြတာဖြစ် ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့တောင် ဖက်စွန်း သဌေးကျွန်း က hotel မှာ ကဲပြီ ရန်ကုန်ပြန်ချိန်မှာ စာရင်ရှင်းတော့ ပြသနာဖြစ်ကြတာပါ။
KMl said... :